हङकङमा स्वास्थ्य चेतना जगाउँदै हिंड्ने म नै किन मोटी भएँ? - हङकङ - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
टीका राना हङकङ, असोज २०
आश्चर्य र डर के छ भने स्वास्थ्य जनचासो बढाउँदै हिंड्ने मेरो आफ्नै तौल पछिल्लो पाँच वर्षमा निकै बढेको छ। २०१३ मा ५०–५२ किलो रहेको मेरो तौल अहिले बढेर ६० हाराहारी पुगेपछि डराउनु परेन त?
केही वर्षयता म हङकङमा स्वास्थ्य जनचासो बढाउने गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएको छु। स्वास्थ्य जागरण भन्नाले स्वस्थ शरीरका लागि कस्तो खानपान र व्यायम गर्ने भन्ने एउटा मुख्य विषय हो।
मलाई आश्चर्य र डर के लागिरहेको छ भने यसरी जनचासो बढाउने गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएको मेरो आफ्नै तौल पछिल्लो पाँच वर्षमा निकै बढेको छ। २०१३ मा मेरो तौल ५०–५२ किलो थियो, जुन अहिले बढेर ६० हाराहारी पुगेपछि म डराउनु परेन त?
हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार हङकङमा स्थनीय चिनियाँ भन्दा हामी नेपाली मोटोपनको बढी शिकार भएका छौं। र, महिलाहरू बढी मोटो हुन्छन् भन्ने मान्यता विपरित हङकङमा पुरुष झन् मोटोपनको शिकार भएको पाइएको छ। सामान्यतः हङकङ, जापान, कोरिया, चीन जस्ता पूर्वी एशियाली क्षेत्रका मानिस खानपानमा चनाखो हुन्छन् र कम मोटो हुन्छन् भन्ने गरिन्छ। तर पछिल्लो अध्ययन अनुसार हङकङमा १८ देखि ६४ बर्ष उमेर समूहका ३९ प्रतिशत मानिस मोटोपनबाट ग्रसित छन्। विशेषगरी ४५ देखि ५४ बर्ष उमेर समूहका व्यक्ति मोटोपनको शिकार भएका पाइएको छ।
हङकङमा मानिसहरू निकै व्यस्त छन्। शारिरीक व्यायाम गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै त्यसका लागि निरन्तर समय छुट्याउन सकिरहेका छैनौं हामी। कसरी र किन हाम्रो तौल बढ्ने गर्छ भन्नेबारे हामी अनविज्ञ छौं। जब आफ्नो तौल बढेको थाहा हुन्छ, तब धेरै ढिलो भैसकेको हुन्छ। हङकङमा महिनाको कम्तिमा ४–५ वटा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम भइरहेका छन् नेपाली समुदायले आयोजना गरेका। जसमध्ये कतिपयमा म पनि सामेल भइरहेको छु। र, पनि आफैं मोटोपनबाट ग्रसित छु। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम गरिरहँदा जब कोही सहभागीले ‘तिमि आफैं पनि मोटी छौ नानी’ भन्दा बल्ल म झसङ्ग हुने गरेको छु।
हङकङमा हामी धेरै मोटाउनुको एउटा मुख्य कारण हाम्रो दैनिकी र खानपान शैली हो। अहिलेको समयमा स्लिम र स्वस्थ बन्न मन कसलाई छैन होला र? तर कतिपय मनिसहरु स्लिम र राम्रो देखिने होडमा एकैपटक खाना खान छोड्छन्, जुन स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन। एकदमै धेरै व्यायाम पनि स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदैन। यसले गर्दा क्यालोरी, प्रोटिन, मिनिरल्स र भिटामिन जस्ता शरीरमा चाहिने पौष्टिक आहारको कमी हुनसक्छ। जसले स्वास्थ्यमा अन्य समस्या देखिनुका साथै तौल झन् बढ्न पनि सक्छ।
विस्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मोटोपन भनेको चाहिने भन्दा अत्याधिक बोसोको मात्रा शरीरमा जम्मा हुनु हो। मोटोपनको कारणले विश्वमा प्रत्येक वर्ष करिब ३० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष करिब तीन करोड ५० लाख मानिस मोटोपनको कारणले असक्त हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।
शरीरलाई चाहिने क्यालोरी हामीले खाने खानाहरुबाट पाउँछौं। जुन विभिन्न काम गर्दा हाम्रो शरीरले प्रयोग गर्ने गर्छ। चाहिने भन्दा धेरै क्यालोरी खानाको रुपमा खाएको अवस्थामा त्यो बोसोको रुपमा शरीरमा जम्मा भएर बस्ने गर्छ। लामो समयसम्म पनि शरीरमा भएको त्यो बोसोलाई प्रयोग गरिएन भने मोटोपन बढ्दै जान्छ।
मोटोपनका धेरै कारणहरु मध्ये हामीले खाने खाना र व्यायाम मुख्य हुन्। पारिवारिक इतिहास, स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना, मासिक आय, वैवाहिक सम्बध, दैनिक क्रियाकलाप, बढ्दो सहरीकरण, र सुविधा सम्पन्न यातायातका साधन मोटोपन बढ्नुका अन्य कारण हुन्।
हङकङका करिब ४० हजार नेपालीमध्ये कति जनामा मोटोपनको समस्या छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए तापनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा अधिकांश नेपालीमा यो समस्या रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। विशेषगरी दैनिक कामकाज र हाम्रो खानपान शैली चिनियाँको भन्दा अस्वस्थ खालको छ, जसले गर्दा चिनियाँ भन्दा नेपालीमा धेरै मोटोपनको समया देखिएको छ।
मोटोपन हाम्रो छालाभित्र मात्र नभएर कलेजो, मुटु, पित्तथैली, आमाशय, आन्द्रा जस्ता शरीरका मुख्य अंगहरुमा हुन्छ। जसले गर्दा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरु आउन सक्छन्। शरीरमा जम्मा भएको बोसो अनुसार मानिसमा स्वास्थ्य समस्या आउने गर्छ। कुनै व्यक्तिमा मोटोपन धेरै छ भने उसको स्वास्थ्यमा मुटु, मधुमेह, स्ट्रोक जस्ता समस्या देखिने खतरा धेरै हुन्छ। त्यसबाहेको मोटोपनले शरीरका प्रत्येक अंगमा स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। मोटोपनका कारण मुटु, मधुमेह, क्यान्सर, फोक्सो सम्बन्धी रोगहरु, स्ट्रोक, प्रजनन प्रणाली सम्बन्धी समस्याहरु, आँखा नदेख्ने समस्या आदि आएको हामीले देखेका छौं।
मोटोपन वेस्ट सर्कम्फेरेन्सबाट नाप्न सकिन्छ। जसमा महिलाको वेस्ट सर्कम्फेरेन्स करिब ३२ इन्च हुनुपर्छ भने पुरुषको वेस्ट सर्कम्फेरेन्स ३६ इन्च। शरीरको तौल ठिक छ छैन् थाहा पाउन विएमआइ (बडी मास इन्डेक्स) नाप्न सकिन्छ। त्यसका लागि आफ्नो तौल र उचाई थाहा पाउन आवश्यक छ। र, आजभोली विएमआइ विभिन अनलाइनबाट खोजेर पनि नाप्न सकिन्छ। स्वस्थ व्यक्तिको नर्मल विएमआइ १८.५ देखि २२.९ सम्म हुनुपर्छ।
बडी फ्याटद्वारा पनि मटोपन छ या छैन भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको उमेर, लिङ्ग, वजन र उचाई थाहा छ भने बडी फ्याट नाप्न सकिन्छ। सामान्य बडी फ्याट पुरुष र महिलाको फरक हुन्छ। जहाँ पुरुषको उमेर ३० वा सो भन्दा कम छ भने सामान्य बडी फ्याट १४ देखि २० सम्म हुनुपर्छ र ३० वा सो भन्दा बढी उमेर भएका पुरुषको बडी फ्याट १७ देखि २३ सम्म सामान्य मानिन्छ। तर महिलाको बडी फ्याट भने पुरुषको भन्दा फरक छ। महिलाको उमेर ३० वा सो भन्दा कम छ भने उनीहरुको बडी फ्याट १७ देखि २४ हुनुपर्छ भने ३० वा सो भन्दा बढी उमेर भएका महिलाको बडी फ्याट २० देखि २७ हुनुपर्छ। महिलाले बच्चाको जन्म दिने र पुरुषहरुको भन्दा महिलाको शरीरमा फरक खाले हर्मोन हुने भएकाले बडी फ्याट धेरै भएको हो।
नियमित व्यायाम र खानामा सन्तुलन गर्न सके मोटोपन घटाउन सकिन्छ। धेरै क्रोनिक रोगहरुको मुख्य कारण मोटोपन भएकाले बेलैमा आफ्नो तौल सन्तुलन गरौं र स्वस्थ बनौं।
प्रकाशित २० असोज २०७५, शनिबार | 2018-10-06 07:56:15